Waftigii dawladda federaalka ee dhawrkii maalmood ee ugu dambeeyey ku sugnaa Puntland oo maanta Galkacyo ka dhoofay. – Radio Daljir
Galkacyo, Oct 16 ? Waftigii ka socday dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya uuna hoggaaminayey Afhayeenka xukuumadda Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ?Yariisaw? ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Galkacyo, kaddib markii uu u gabagaboobay socdaalkii ay ku yimaadeen Puntland.
Waftigaan oo u kicitimay magaalada Muqdisho ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Galkacyo waxaa ku sii sagootiyey mas?uuliyiin ka tirsan hay?adda dawliga ah ee Puntland, kuwaasi oo ay garoonka isku-marxabeeyeen.
Waftigaan oo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey ku suganaa deegaannada Puntland ayaa socdaalkooda imaatin ku qotomay isla-qaybsiga qorshe-qarameed ku aaddan xaslinta iyo nabad ku soo dabbaalidda dalka, qorshaasi oo ah mid golaha wasiirrada federaalka dhawaan meel-mariyeen, kaddibna loo bandhiyey dhinacyada Soomaalida si ay aragti ugu biiriyaan.
Kulamo la xiriiray arrinkaasi xasilinta iyo nabadaynta dalka ayaa shalay aqalka madaxtooyada ee magaalada Garowe ugu soo dhammaaday mas?uuliyiintaan federaaliga ah, madaxda sarsare ee Puntland iyo xubno ka socday culimo Aw-diinka Ahlu-sunna Waljamaaca, kaasoo la iskula meeldhigay wadiiqada ugu wanaagsan nabad ku soo dabaallidda Soomaaliya.
Waftigaan dawladda federaalka ee maanta ka dhoofay magaalada Galkacyo ayaa shalay galibkii dambe soo gaaray Galkacyo, waxaana ay kulamo la yeesheen mas’uuliyiinta maamulka Galmudug iyo madax kaloo Ahlu-sunna Waljamaaca ka tirsan, kulamadaasi oo loo wadahadlay isla qorshaha xasilineed ee dalka.